INGIRIIS BOSTON-BULLDOG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Ingiriis Boston-Bulldog Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Boston Terrier / English Bulldog Isku-dhafan Eeyo
Deacon the Boston Terrier / English Bulldog isku darka markuu jiro 6 sano— 'Deacon wuxuu ku dhashay 8-8-08 magaalada Riverside, California. Hooyadiis waxay ahayd Boston Terrier aabihiisna wuxuu ahaa Ingiriis Bulldog. Isagu waa aad u xasaasi ah oo shucuur leh oo fiiro gaar ah u baahan. Wuxuu doorbidayaa inuu ku seexdo dabool hoosta barkimo oo uu iskulaalaabo. '
Ingiriisiga Boston-Bulldog ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Boston Terrier iyo Ingiriis Bulldog . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
adhijirka jarmalka iyo isku dhafka coyote
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Ingiriis Boston-Bulldog
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeye = Ingiriis Boston Bulldog
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Boston Bulldog
Waxaan haysanay Bocephus tan iyo markii uu jiray 6 bilood. Bocephus waa 3-sano jir, 45-rodol, Ingiriis Boston Bulldog (hooyo: Ingiriis Bulldog, aabe: Boston Terrier).
Jake the Ingiriis Boston-Bulldog— 'Aabihiis waa Ingiriis Bulldog hooyadiisna waa Boston Terrier. Wax weyn ku soo kordhi qoyskeena. '
Waxaan hadda qaadanay Scarlett, oo ah Bulldog Boston (Boston Terrier / English Bulldog). Iyadu waa macaan, laakiin feisty 2-sano-jir ah. Muxuu wax weyn ugu soo kordhiyay qoyskeena !! '
Bailey, English Bulldog / Boston Terrier hybrid (Ingiriis Boston-Bulldog) eey yar oo jirta 2 bilood
Bailey, English Bulldog / Boston Terrier hybrid (Ingiriis Boston-Bulldog) eey yar oo jira 4 ½ bilood jir— 'Bailey wuxuu ahaa qashin qubka wuxuuna ka buuxo tamar iyo dabeecad. Waxay cadeysay inay aad u caqli badantahay isla markaana xariiftay xeelad kasta iyo amar kasta oo suuragal ah 4-tii bilood ee ugu horeysay. Marna ha joojinin inaad ciyaartid waana nuugista subagga looska. '
Henley the English Boston-Bulldog puppy at 2 bilood jir— 'Isagu waa Ingiriis Bulldog ah oo lagu daray Boston Terrier. Wuu ka buuxaa tamar marka uu soo jeedo, taas oo ugu badnaan ah 4 saacadood maalintii. '
american eskimo iyo roomaaniyiin isku dhafan
Chloe the English Boston-Bulldog markay 10 bilood jir tahay— 'Hooyadeed waxay ahayd Ingiriis Bulldog aabaheedna wuxuu ahaa Boston Terrier. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto xayawaankeeda cufan iyo qof kasta oo la ciyaari doona! Iyadu waa gacaltooyo dhab ah! '
'Tani waa Marvin, waa 1 jir Boston Bulldog ah. Hooyadiis waxay ahayd Boston Terrier aabihiisna wuxuu ahaa Ingiriis Bulldog. Isagu waa nin faraxsan oo firfircoon oo sida sariirta u faraxsan ku faraxsan sida uu kubbada uga eryanayo banaanka. Isagu waa mid aad ufiican isla markaana si cajiib ah u ciyaara. Wuxuu jecel yahay qof kasta oo la kulmo!
Eeg tusaalooyin badan oo ah Ingiriisigii Boston-Bulldog
Ingiriis Boston-Bulldog Sawirada 1
Liiska eyda isku dhafan ee Bulldog Mix
Australiyaanka / xuduudaha isku darka collie
3 bilood jir Jarmal ah eey adhi ah